Profaịlụ ụlọ ọrụ - Micomme Medical Technology Development Co., Ltd.
Ventilator na-abụghị ndị na-adịghị emerụ ahụ
Usoro ọgwụgwọ COPD
Micomme Medical Technology Development Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ ndị China na-eweta elekwasị anya na ngwaọrụ ahụike maka nsogbu ụra na usoro iku ume. Anyị nwere mmasị na iwebata mmezi na-eduga na nlekọta ụlọ na ụlọ ọgwụ nwere akara nke "Sepray" na ọrịa akụkụ iku ume na-adịghị ala ala. Anyị na-enye usoro sayensị, ahụike na nke anụ ahụ mgbe niile maka ndị dọkịta na ndị ọrịa na ụra ụwa na ahịa iku ume.
Igwe ojii igwe ojii na-ahụ maka ahụike M + na-enwe ike inyocha ọnọdụ ndị ọrịa nọ na ya ma lelee ọgwụgwọ ndị ọrịa iji melite nsonaazụ ha site na nnukwu data.
Ndi ohuru ohuru a wulitere uru anyi di egwu. Ruo ugbu a, anyị akwadoro ma ọ bụ tinye n'ọrụ nke ihe karịrị narị patent 100. Maka ọdịnihu, anyị raara onwe anyị nye inye ndị ahịa anyị ụdị kacha mma ngwaahịa na ọrụ.
Platini M + ahụike ahụike bụ ọrụ * 7_ 24h maka nke azụmaahịa maka gị. Agbanyeghị ọrụ, njem azụmahịa, njem, ị ka nwere ike nwee nleba anya oge ọ bụla, ebe ọ bụla. Ọ na-enye gị na ezinụlọ gị ezigbo onye nlekọta. M + Ahụike nwere ike jikọta data ụra niile wee mepụta mkpesa nyocha nke ọkachamara na-akpaghị aka. Ọbụlagodi mgbe ịnọ n ’ụlọ, inwere ike inweta usoro nlekọta kachasị ọrụ ma ọfụma.